Miino hore oo carruur kula qaraxday Galgaduud – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Balanbal – Mareeg.com: Hal carruur ah ayaa ku dhintay labo kalena way ku dhaawacmeen deegaanka Balanbal ee gobolka Galgaduud, kaddib markii ay maanta la qaraxday miino ay ku ciyaarayeen.
Guddoomiyaha maamulka deegaanka Balanbal, Hareeri Xasan Barre ayaa sheegay in mid ka mid ah carruurta uu soo gaaray dhaawac halis ah, isla markaana lagu daweynayo xarun caafimaad oo ku taalla deegaankaas.
Hareeri Xasan Barre ayaa waalidiinta u soo jeediyay inay carruurta ka ilaaliyaan ku ciyaarista walxaha qarxa si looga hortago dhibaato soo gaarta.
Guddoomiyaha ayaa mas’uuliyiinta hay’adaha miino-baarista iyo dowladda Soomaaliya ka codsaday in si degdeg ah deegaanka looga sameeyo howlgallo miino-baaris ah.
Guddoomiye ku-xigeenka degmada Balanbal Maxamuud Maxamed Cabdi ayaa isaguna sheegay in degmada ay ku saasanyihiin haraadiga waxyaabaha qarxa, taasi oo uu ku sheegay inay keentay falkaasi.
“Qasaaruhu saddex ayuu ku koobanyahay oo carruur da’dooda u dhexeyso 7-11 jir, isbitaalka degmada ayaa la geeyay inkasta uusan wax ka qaban karin xaaladooda, ayna ku dadaalayaan sidii isbitaallada kale loo gaasiin lahaa” ayuu yiri Maxamuud.
Guddoomiye Ku-xigeenka degmada Balanbal ayaa sheegay in muddo badan ay ka cabanayeen sida wax looga qaban karo, miinooyinka dhulka ku aasan, isagoo dowlada Federaalka ah ka codsaday in wax laga qabto haraadiga waxyaabaha qarxa ee dhulka ku aasan.
Degmada Balanbal ayaa degmo dhacda xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana agagaaraheeda ku aasan miinooyin fara badan oo dhulka la geliyey xilliyadii todobaatameeyadii ee Soomaaliya iyo Itoobiya dagaallameen.